बाँस्कोटा जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अ,ख्तियार प्रमुख’सँग भेट…हेर्नुहोस!
काठमाडौं । कुरा तीन दिन अघिको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा अ,ख्तियार प्रमुख नविनकुमार घिमिरेलाई बोलाए । ‘तपाईसँग अलिकति सल्लाह गर्नुछ, बालुवाटार आउनुहोस, साँझ’ प्रधानमन्त्री ओलीले घिमिरेलाई टेलिफोन गरी बोलाए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफै टेलिफोन गरी बोलाएपछि उनी नजाने कुरा भएनन् । उनी बालुवाटार गए ।
प्रतिपक्षी काँग्रेसले अ,ख्तियार सरकारको छायाँ बनिरहेको र उसले सम्वैधानिक स्वायक्त अं,गका रुपमा काम गर्न नसकेको आ,रोप ललिता निवास प्र,करणमा अ,ख्तियारले अ,दालतमा लगेको मु,द्दा पछि आ,रोप लगाईरहेको छ । ललिता निवास प्र,करणमा कम्युनिष्ट पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भटटराई र माधव नेपाललाई मु,द्दा नचलाईएको, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोराका सन्र्दभमा भने जग्गा फिर्ताको नाममा उन्मुक्ति दिईएको र काँग्रेस नेतालाई भने जानीजानी फसाईएको आ,रोप काँग्रेसको थियो ।
यो प्र,करणमा काँग्रेस नेता विजय गच्छेदार सहित १७० जनालाई अ,ख्तियारले अ,दालतमा मु,द्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसमध्ये १५२ लाई भ्र,ष्टाचार र अन्यलाई जग्गा ज,फ्तका लागि अ,ख्तियारले मु,द्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही बीच अर्काे फ,न्डा आयो ।
प्रधानमनत्री ओलीका अति विश्वासप्राप्त निर्वतमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्र,करणमा ७० करोड क,मिसन माग्दै गरेको अडियो प्र,करण सार्वजनिक भयो । बाँस्कोटाले पदबाट रा,जीनामा दिए । उनलाई राजीनामा मात्र गराई उन्मुक्ति दिने प्रयासमा प्रधानमन्त्री रहेको आ,रोप पनि लाग्यो ।
दुई दिनपछि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्र,करणमा गोकुलको मात्र आँ,टले उनले क,मिसन डि,ल नगरेको र यसमा प्रधानमनत्रीकै सं,ग्लनता रहेको भन्दै अ,ख्तियारमा उ,जुरी प¥यो । प्रेम कैदी र आ,नन्दराम पौडेलले ओली र बाँस्कोटामाथी छानिवनको माग गर्दै अ,ख्तियारमा उ,जुरी दर्ता गराए । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले अ,ख्तियार प्रमुखलाई किन बोलाए आफ्नै निवासमा ?
आम चासोको विषय थियो । भलै गोकुल प्र,करणमा प्रधानमन्त्रीले हिजो बिहिबार पार्टीको वाग्मती प्रदेशको भेला तथा रा,जनीतिक प्र,शिक्षणमा बचाउ गरेर पहिलो पटक सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिए । तर यो प्र,करण पछि सरकारमा ओलीको हात ‘का,टिएको’ जस्तो अवस्था छ ।
सरकारको प्रतिरक्षामा ख,रो रुपमा उत्रने नेताको अभाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई परिरहेको छ । आफ्नै बालकोट स्थित निवासमा बस्दै आएका बाँस्कोटालाई अ,ख्तियारबाट कसरी जोगाउने र निश्कलंक फेरि रा,जनीतिमा कसरी पूर्नस्थापित गराउने भन्ने चिन्ता अहिले प्रधानमन्त्रीमा सबैभन्दा बढी छ । त्यसमाथी यो प्र,करणमा आफै समेत मु,छिन पुगेका छन्, उनी । उनी वि,रुद्ध समेत अ,ख्तियारमा मु,द्दा परिसकेको छ ।
उनले अडियोमा स,त्यता नरहेको विहिबारको पार्टी कार्यक्रममा बोले पनि । तर तीन दिन अघिको अ,ख्तियार प्रमुखसँगको बालुवाटार भेट भने गोकुल प्र,करणको बैठान कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत रहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । झण्डै दुई घण्टा प्रधानमन्त्रीले अ,ख्तियार प्रमुख घिमिरेसँग छलफल गरेका थिए । भ्र,ष्टाचारको दा,ग लागेपछि गोकुलको रा,जनीति अहिले अ,न्धकारमा धकेलिएको छ । सार्वजनिक रुपमा उनी मु,ख देखाएर हिड्न सक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् ।
त्यही भएर पनि ओलीलाई उनको राजनीति जोगाउने चिन्ता छ । उनले अब यो प्र,करणमा अ,ख्तियारलाई छा,नबिन आग्रह गरेका छन् । पार्टीले नि,लम्वन गरी छा,नविन गर्नुपर्ने कुरा उठेपनि उनले का,रवाही गर्न दिएका छैनन् । मात्र यसमा अ,ख्तियारले अ,नुसन्धान गर्छ भनेर पार्टी नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीले पार्टी अ,नुसन्धानबाट पन्छाउन खोजिरहेका छन् ।
स्रोतका अ,नुसार अ,ख्तियारले बाँस्कोटा प्र,करणमा सा,मान्य छा,नविन गर्ने र क,मजोर मु,द्दाका रुपमा अ,दालत लैजाने र अ,दालतबाट अडियो फेक भएको बनाई गोकुललाई चो,ख्याउन कसरी सकिन्छ भन्नेमा यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतको भनाई छ ।
उनले अ,ख्तियार प्रमुखलाई किन भेटे ? यो भेटपछि बाँस्कोटा प्र,करण अब कसरी अगाडी जान्छ र बाँस्कोटाको रा,जनीतिमा क,मब्याक कसरी हुन्छ ? त्यो भने केही समय कुरेपछि थाहा लाग्ने देखिएको छ ।